Caqabadaha Farmaajo ka hortaagan magacaabista Ra'iisul Wasaaraha | KEYDMEDIA ONLINE
Caqabadaha Farmaajo ka hortaagan magacaabista Ra’iisul Wasaaraha
Dadka odorasa siyaasadda Soomaaliya ayaa sheegaya in madaxweynaha albaab kasto u garaacayo sidii uu muddo kororsi u sameysan lahaa.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan weli go'aan rasmi ah ka gaarin ku dhawaaqista Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya, kaasoo si weyn loo wada sugayo.
Wararka ayaa sheegaya in magacaabista Ra'iisul Wasaaraha ay hor taaganyihiin caqabado dhowr ah iyo qorshooyin madaxweynaha wato, kuwaasoo gundhig u ah dib u dhaca magacaabista oo horey looga codsaday inuu soo dedejiyo.
Qorshaha koowaad ayaa ah in madaxweynaha doonayo in baarlamaanka Soomaaliya uu ku dhawaaqo muddo kororsi labo sano ah, si meesha uga baxaan su'aalo badan oo ku geedaaman doorashadda la filayo inay dhacdo dhamaadka sanadkan.
Qorshaha labaad ayaa la sheegayaa in madaxweynuhu doonayo inuu dib u dhaco shirka wejiga saddexaad ee Dhuusamareeb ee 15-ka Agoosto, si madaxweynaha u hirgeliyo go'aanno macquul ah oo la tegi karo gogosha.
Sidoo kale, Madaxweynaha ayaa la sheegaya in uu sameysanayo isbaheysi dhinaca maamulada ah, waxaana xusid mudan in ay dhawaan magaalada Muqdisho soo gaareen madaxweynayaasha maamullada Hirshabeele, Koonfur Galbeed iyo Galmudug, oo uu la kulmay.
Si kataba waxaa arintaan kor kala socdo oo ka biya diidan Axsaabta Mucaaradka oo dhowr jeer oo hore ka digay muddo kororsi, waxaana haatan sii xoogeysanaya Walaaca laga qabo in baarlamaanka Soomaaliya muddo kororsi labo sano ah ku dhawaaqo.